Wareysi gaaban Sheekh Cabduraxmaan Abyad | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Wareysi gaaban Sheekh Cabduraxmaan Abyad
Sheekhani waxuu kamid yahay culimada ama ducaada soomaaliyed ee nool casrigan. Sheekhani waxuu kamid yahay culimada caanka ka ah xagga mutamarada qaarada Yurub. Sheekhu waxuu ku noolyahay dalka Denmark. Mar uu qabanayay dawro Sarfi ah oo ka dhacaysay magaalada Odense ee dalka Denmark, ayaa dhalinyaradii kasooo qaybgashay qaar kamid ah la yeesheen waraysi gaaban oo ku saabsan Sheekha tariikhdiisa oo kooban iyo sua’aalo dhawr ah. Su’aalaha uu wareysigu xanbaarsana waxaa kamid ahaa :
Sheekha meshuu ku dhashay & Barashadiisii cilmiga?
Dhalinyarada maxaad kula talin lahayd cilmiga barata?
Media iyo guud ahaan culimada is-raddintooda?
Magaciisa iyo barbaaridiisa
Sheekh Cabduraxmaan Axmed Cilmi. Waxuu caan ku yahay “ Sheekh Abyad”. Aaabahii waxaa lagu naanaysi jiray “ Abyad” . Awoowgiina “Xeef”.
Sheekhu waxuu ku dhashay Laascaanood/Sool taariikhdu markay ahayd 12 april 1974. Waxayna ahayd maalinta loo dabaal dego militeriga soomaliya.
Sheekhu waxuu lasoo koray aabahii iyo hooyadii.
Barashadiisa Cilmiga Sheekhani muusan weligii u safrin wadan carbeed cilmi barasho darted, balse waxuu wax kusoo bartay gudaha wadanka Soomaliya. Dugsi dhexe , sare iyo hooseba waxuu kusoo qaatay isla dalkii.
Xagga diinta sheekhu waxuu ahaa mid hor fadhiista kolba sheekh oo cilmiga sidaa ku raadsada. Kitaabkii ogu horeeyay ee uu akhristo waxaa la odhan jiray “ كنت قبوريا” waxaaana qoray sheikh kasoo tawbad keenay suufi-nimada. Sheekhu waxuu noo sheegay inuusan kitaabkaas hal ka fahmin xiligaas..
Sheekhu waxuu cilmiga ka qaatay culimadii markaa joogtay dalka soomaliya qaar kamid ah. Culimadaasna waxaan ka haynaa magacooda koobaad uun waxayna kala ahaayen :
Sheekhu waxuu culimadaas ka qaatay kutub kala duwan.
Ardaydiisa Sheekha markii ogu horeeysay ee uu kitaab dad u dhigo waxay ahayd sanadkiisii koobaad ee “secondary-school”. Waxuuna dhigi jiray kitaabka Ajruumiga ee naxwaha.
Sheekhu waxuu duruus ka bixiyaa dalka uu hadda ku suganyahay ee Denmark. Duruustiisa qaarna waxaa laga heli internetka iyagoo isagu jira maqal iyo muuqaal.
Sheekhu waxuu kaloo qabtay dawrooyin kala duwan, kuwaas oo loo qabtay dhalinyaro da’doodu kala duwantahay, badankoodna ah kuwa ku dhashay ama ku koray qurbaha.
Dawrooyinkaas waxaa kamid ah:
Nadhmu Qawaacid Al-fiqhhi
Sarfiga Q1aad << Youtube ayaad ka heli kartaa
Sarfiga Q2aad << Youtube ayaad ka heli kartaa
Sheekhu waxuu ka qaybqaataa mu’tamarada lagu qabto Qaarada Yurub. Muxaadaraat badan oo kuwiis ahna waxaa laga heli barta internetka.
Sheekhu muusan qorin wax kitaab ah, laakiin laga yaabo inuu mustaqbalka qoro. Sheekhu waxuu qoray rasaa’il . Laga yaabo in lagu arko internetka rasaa’iladiisa qaar.
Sheekha waxaan weydiinay “Maxaad kula talin lahayd dhalnyarada barata cilmiga “?
Waxuuna yidhi: Cilmiga waa in culimada laga qaato weliba culima lagu kalsoonyahay. Qofkaan culima haysana cajaladaha haka qaato.
Waa in la ilaaliyo aadabta cilmiga. Maalmahan waxaa batay in culimada lagu afbarto oo aan la weyneeynin. Wilashu badanaa waxay ku mashquulsanyihiin inay dad tabdiiciyaan, oo ay dhahaan hebel waa bidco hebel waa sidaa. Gabdhuhu badanaa lama qabaan arintaas.
Waxaas waa in laga baxaa oo lagu dadaalo masaa’ilka ay faa’iidada kuugu jirto.
Sheekha waxaanu weydiinay “ Maalmahan waxaa badatay raddin ka dhex dhacda culimadiina dhexdood , war-isgaadhsiinaduna wax bay sheegaan , marka sideen u rumeysanaa? Waxuuna ku jawaabay:
Waagii hore soomaalida jidkooda hal ayuu ahaa, bil macnaa diinta ma kala bax-baxsaneen. Haddana shuyuukhda soomaaliyeed saas iskuma khilaafaan laakin dabcan waxaa soo baxday waayahan danbe in la fududeysto arinta la yidhaah “is gaalaysiin”. Marka waxaa lagu qasbanaaday in la raddiyo haddii kale aamusnaanta ayaa badnaan.
Arinta ah war-isgaadhsiinta/media : Waxaan odhan lahaa taxadarka hala badiyo oo waxii wax laga faa’iidayo uun halagu mashquulo. Maalin dhawyt waxaa la sheegayay fatwa Sheekh Shariif Cabdinuur la yidhi wuu fatwooday, tasoo kale waan ogaan karnaa inay been tahay sababtoo ah sheekha xaaladiisa ayaanu ka warhaynaa oo inuusan awoodin ayaan hubnaa
Waxaa kale oo uu sheekhu soo hadal qaaday Aflaagadada la aflagaadeeyay Nabiga sallalaahu calayhi wasallam iyo ficilada ay bixinayaan muslimiintu. Waxuuna yidhi :
Waa inaad samayso wax u cuntama gargaarida Nabiga sallalaahu calayhi wasallam. Gaal aan qiimo lahayn mahan in la siiyo attention/qiimo . Tusaale video ku jira youtube yaan lagu badin daawashada si aysan iyagu xataa caan u noqon.
Dhibaatada haysata Muslimiinta iyagaa heerkan is gaadhsiiyay oo dintooda kuma dhaqmaan iyaguna iskuma xidhna
Inagu inaan isa saxno ayaa loo baahanyahay oo aan horta is dhisno, si nalooga cabsado.
Ilaahay swt ha xifido sheekha, ajar iyo xasanaatna haka siiyo dacwada uu wado. Khaatumadiisana haka dhigo mid Ilaahay rali geliso < Aaamin
WQ: Kaltum Abdurashiid & Muhaditha-wordpress
from → Sheekh Abyad, Taariikhda Culimada Soomalida
← Dhahabiyul casr- Almuxadith Cabduraxmaan Almacaalimi
Waa noocee Xadiith-ka Matruuk-a? →
Ahmed noor qorane permalink	November 13, 2012 9:35 am	(Masha’allaaah ) culimada islamka, iyo , ku weena soomaliyed ba’ allaah ‘ka dhigo kuwa , mideysan oo is raacsan,
Reply	Muhaditha.wordpress.com permalink*	November 17, 2012 6:35 pm	Allahuma Aaamiin walaal